पछि - अमेजन प्राइममा हेर्नका लागि चलचित्रहरूको गाथा | बेजिया
सुसाना Godoy | 11/01/2022 14:00 | समाचार
यदि तिनीहरू अझै पनि तपाईंलाई परिचित लाग्दैनन् भने, त्यसोभए तपाईंले कुरा गर्नको लागि धेरै दिने सागाहरू मध्ये एउटाको आनन्द लिनको लागि ठाउँ पाउनुहुनेछ। यसको शीर्षक 'अफ्टर' हो र यो लेखिका अन्ना टोडको उपन्यासमा आधारित कथा हो। युवा सम्बन्ध, पहिलो निराशा, मित्रता र पारिवारिक समस्याहरू केहि विकल्पहरू हुन् जसलाई कथामा छोएको छ।
प्रत्येक चलचित्र टोडको पुस्तकहरू मध्ये एकमा आधारित छ, अहिले सम्म हामीसँग ती चारमध्ये तीनवटा फिल्महरू छन् जसले तिनीहरूलाई पूरा गर्छ। यदि तपाइँ यस जस्तो कथाको बारेमा अलि बढी जान्न चाहानुहुन्छ, जसले तपाइँलाई मोहित तुल्याउने निश्चित छ, तब तपाइँ पछि लाग्ने सबै कुरा छुटाउन सक्नुहुन्न किनकि यसले तपाइँलाई धेरै चासो दिन्छ। तपाईं यसको लागि तयार हुनुहुन्छ वा तयार हुनुहुन्छ?
1 पछि: सबै कुरा यहाँ सुरु हुन्छ
2 पछि: हजार टुक्राहरूमा
3 पछि: हराएको आत्माहरू
पछि: सबै कुरा यहाँ सुरु हुन्छ
हामीले छलफल गरिसकेका छौं, अहिलेसम्म त्यहाँ तीनवटा चलचित्रहरू छन् जुन तपाईंले अमेजन प्राइममा हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो शीर्षक छ 'पछी: सबै यहाँ सुरु हुन्छ'। यसमा हामीले युवायुवती रोमान्टिकवादले धेरै कुरा भन्न खोज्छौं। हामी टेसा यंगलाई भेट्नेछौं जो आफ्नो घरबाट बाहिर सर्दैछ किनभने उनी कलेज सुरु गर्दैछिन्। उसले नयाँ साथीहरू बनाउनेछ, जसलाई उनकी आमाले मन पराउँदैनन्, तिनले कम्तीमा पनि वास्ता गर्दैनन्। यो कसरी कम हुन सक्छ, उनको जीवनमा एक केटा पनि देखिन्छ। निस्सन्देह, जब यस्तो देखिन्छ कि आकर्षणले ती दुवैलाई समातेको छ, तेस्रो व्यक्तिले सबै कुरा उनीहरूले एक रातमा बनाएको खेलमा आधारित थियो भनी उनको आँखा खोल्ने प्रयास गर्दछ। केहि जुन पूर्ण रूपमा सही थिएन, तर यसले टेसालाई आमूल परिवर्तन गर्छ। यद्यपि उनी र हार्डिनमा धेरै समानता छ र यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूसँग साझेदारी गर्न अझै धेरै छ। त्यसोभए पहिलो भागले हामीलाई उनीहरू कसरी भेटे, कसरी उनीहरूको सम्बन्ध देखा पर्‍यो तर पहिलो निराशा र पारिवारिक समस्याहरू पनि देखाउँदछ।
पछि: हजार टुक्राहरूमा
तिनीहरू बढ्दै जाँदा नयाँ कथाहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। अब टेसा अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बनाउँछिन्, किनभने यो वास्तवमै चाहिन्छ र चाहिन्छ। उनले एक इन्टर्नको रूपमा काम पनि पाउँछन्, त्यसैले यो उनको भविष्यको लागि राम्रो अवसर हो र उनी बाटोमा केहि पनि आउन चाहँदैनन्। यद्यपि यो सधैं हामीले चाहेको जस्तो सरल छैन। किनभने उनको काममा, उनको एक साझेदार छ जसले उनलाई पनि आकर्षित गर्छ, किनकि उनलाई थाहा छ कि यो उनको पक्षमा चाहिने संस्करण हो र हार्डिन जस्तो कोही होइन। यसले फेरि यसको सबैभन्दा खराब अनुहार देखाएको जस्तो देखिन्छ र यो हो कि जब तपाईले पहिले नै सोच्नुभएको थियो कि तपाईले केहि समस्याहरू पार गरिसक्नु भएको छ, ती तपाईको अगाडि देखा पर्छन्। तर यो सत्य हो कि तपाईं प्रेम लड्न सक्नुहुन्न, वा हुन सक्छ? गाथाको दोस्रो फिल्म जुन तपाईले Amazon Prime मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यद्यपि यसले राम्रो समीक्षाहरू प्राप्त गरेको छैन, यस्तो देखिन्छ कि जनताको अर्को राय थियो।
पछि: हराएको आत्माहरू
हामी तेस्रो चलचित्रमा पुग्यौं, र अहिलेसम्म यो अन्तिम चलचित्र हो जुन हामीले अमेजन प्राइममा सक्षम हुन उपलब्ध छौँ। यो 2021 मा रिलिज भएको हुनाले र हामीले चौथो भाग आउनको लागि केहि समय कुर्नुपर्नेछ। अहिले यी दुईबीचको सहअस्तित्वको सम्बन्ध बलियो हुँदै गइरहेको देखिन्छ । तर जब यो वयस्क सम्बन्धको रूपमा सुदृढ भएको जस्तो देखिन्थ्यो, तिनीहरू प्रत्येकका आमाबाबु र परिवार खेलमा आउँछन्। त्यसोभए तिनीहरूले महसुस गर्नेछन् कि सायद तिनीहरूसँग जीवनको विपरीत विचारहरू हुनेछन् र तिनीहरूका भावनाहरूमा पनि शंका गर्नेछन्, किनभने त्यहाँ धेरै रहस्यहरू छन् जुन फिल्म भर खुला हुनेछ। तर यो जहिले पनि राम्रो हुन्छ कि तपाईले यसलाई आफ्नै लागि हेर्नुभयो किनभने यसमा रिल गर्न धेरै इतिहास छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » पछि: अमेजन प्राइममा हेर्नका लागि चलचित्रहरूको गाथा
रोबिन्सन सूची, व्यापार कलहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस्!